यि हुन् :नेताको भेषमा अण्डरकभर एजेन्ट !
Posted by abc staff.3years,3months ago
काठमाडौं । संविधान निमार्णको सबालमा भइरहेको संघर्ष र मागहरुलाई लिएर जनतासामु आफ्ना कुरा राख्न जानु पर्ने तराईका नेताहरु ‘प्रोटोकल’ नै बिर्सेर लैनचौरस्थित भारतीय दुतावासको शरणमा पुगेका छन् । लैनचौरको शरणमा पुगेर तराईका जनताको शिर निहुराउन यसपटक पनि मधेसी नेताहरु सफल भए । नयाँ संविधान निमार्णको नेतृत्व लिएको नेपाली काँग्रेस पार्टीकै नेता दुतावासको शरण पुगेको विषयले भने काँग्रेसभित्रै हलचल भएको छ ।
डन बब्लुको कनेक्सन टिबडेवालदेखि घैटेसम्म
काठमाडौं । जमीम साह हत्या काण्डमा संलग्न रहेका पूर्व डीएसपी जगदीश चन्दलाई महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखा टेकुको टोलीले पक्राउ गरेपछि प्रहरीको चौतर्फी प्रशंसा भयो । सञ्चारउद्यमी जमीम साहको राजधानीस्थित लाजिम्पाटमा २०६६ माघ २४ गते गोली हानी हत्या भएको थियो । प्रहरी उच्च अधिकारीसँग डीएसपी चन्दको उठबस रहेका कारण लामो समयदेखि उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले सकेको थिएन । कहिले दिल्ली, लखनउ त कहिले राजधानीमै उनी लुकेर बस्दै आएका थिए । चन्द राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका बहालवाला एक एआईजीका नाताले ज्वाई पर्छन् । अण्डरवल्डका कुख्यात डन बब्लुश्री वास्तबको योजना मुताविक सञ्चारउद्यमी साहको हत्या भएको बताएपनि उनलाई नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको छैन ।
काठमाडौं । मधेसी दलका नेताहरु तराईको मध्य भाग ‘मधेस’ लाई सुटुक्क नेपालबाट टुक्राएर राज गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको रहस्य खुलेको छ । मधेसलाई टुक्राउने अभियानमा लागेका पागल तथा कथित डाक्टर सीके राउतको लाईनमा मधेसी नेताहरु उभिन थालेपछि यो कुरा पुष्टि हुन थालेको हो । पदको अख्तियारी दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति थोपरेको आरोपमा सजाँय काटेर जेल बाहिर आएका जयप्रकाश गुप्ताको समूहले राउतलाई सघाइरहेको स्रोतले बतायो । स्रोत भन्छ–‘राउतले आफ्नो सुरक्षाका लागि कुण्डले–मुण्डले आपराधिक पृष्टभूमिका अपराधी दायाँ बायाँ बोकेर हिड्ने गरेका छन् । ती आपराधिक जत्था तराईकै अर्को आपराधिक समूह जयकृष्ण गोईत र गुप्तासँग आवद्ध रहेका छन् ।’
एभरेष्ट होटलमा रातो स्टिकर टाँस्नु पछाडीको तीन रहस्य
एभरेष्ट होटलका कर्मचारीहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । पुनरावदेन पाटन अदालतले एभरेष्ट होटलका निष्कासित कर्मचारीहरुको हकमा गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । राजधानीको पाँच तारे होटल एभरेष्टको ब्यबस्थापनले बर्षौदेखि काम गर्दै आएका २ सय ८० जना आफ्ना कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । बैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पपछि होटलमा भएको भौतिक क्षति र रोकिएको सेवालाई कारण देखाएर ब्यबस्थापनले सो निर्णय गरेको थियो । जबकी पहिलो महाभूकम्प पछि होटलका कर्मचारीहरुलाई बैशाख २९ गतेको भूकम्प जाँदासम्म होटलमा जर्बजस्ती काम गर्न बाध्य पारेको थियो ।
सोही क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले बैखाख २४ गते होटलको निरिक्षण गरी हरियो स्टिकर टाँसेको थियो । उक्त मन्त्रालयले जेठ १२ गते पुन: होटलको निरीक्षण गर्दै रातो स्टिकर लगाउँदा होटलमा कार्यरत कर्मचारीहरु तीनछक परेका थिए ।
डा.भट्टराईको राष्ट्रवाद सिके राउतमा विलिन
Posted by abc staff.3years,4months ago
कसैको पनि हुन सकेनन् नेपालका मानबअधिकारकर्मी काठमाडौं । मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेष्टी ईन्टरनेशनलको पछिल्लो क्रियाकलापप्रति असहमति जनाउँदै मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी बाहिरिएसँगै मानव अधिकारको खोल ओढेर अवैध काम गर्नेहरुको भण्डाफोर भएको छ । पहाडीले एम्नेष्टी ईन्टरनेशनलको पछिल्लो अवैध हर्कदका बारेमा आफ्नो धारणा राख्दै बाहिरिएको विषयले तरंग पैदा भएको हो । पहाडी बाहिरिएसँगै एम्नेष्टी ईन्टरनेशनल नेपाल शाखाका पूर्व सभापति कृष्ण कँडेलले पनि एम्नेष्टीको नियतमाथि शंका उठाउँदै बाहिरिए । नन्दप्रसाद अधिकारीको निधनबारे नबोल्ने एम्नेष्टीले सिके राउतले लिएको विखण्डनको पक्षमा वकालत गरेको भन्दै कँडेल पनि बाहिरिएका हुन् ।
भ्रष्टाचारी पक्राउ गर्न छाडेर सेलीब्रेटी बन्ने लोकमानको रहर
काठमाडौं । सार्वजनिकि निकायमा पद र शक्तिको अख्तियारी दुरुपयोग गर्नेमाथि अनुसन्धान गरी कारवाही गर्नेसम्मको अधिकार पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की अधिकांश समय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बेतित गर्न थालेका छन् । प्रमुख आयुक्त जस्तो ब्यक्ति भर्खरका ‘टिनएजर’ केटाकेटी जस्तै फेसबुकमा झुण्डिन थालेपछि अख्तियारकै कर्मचारी अचम्मित भएका हुन् । प्रमुख आयुक्त कार्की आजभोली आफ्नै फेसबुक पेज ‘लोकमासिंह कार्की’ लाई फेसबुकमा विज्ञापन नै दिएर ‘लाईक’ बढाउने काममा ब्यस्त छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म कार्कीको पेजमा ६१ हजार बढीले लाईक गरिसकेका थिए ।
आईजीपी अर्यालसँग ‘ईगो’ साँध्दै गृहमन्त्री
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको बढुवा, सरुवा र मालदार ठाउँमा पठाउँदा कुनै सुनवाई नगर्ने तथा गृहमन्त्रीलाई नटर्ने प्रवृत्ति आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले देखाएपछि गृहमन्त्री बामदेब गौतम पुरै प्रहरी संगठनमाथि खनिएका छन् । अर्यालसँग रकमको मोलमोलाई नमिल्ने तथा आईजीपी अर्यालले एकलौटी गरेकै कारण ‘ईगो’ साँध्न थालेका गृहमन्त्री गौतम पछिल्लो समय पक्राउ पूर्जी सशस्त्र प्रहरीले जारी गर्न पाउने अधिकार दिन तल्लिन देखिएपछि उनको षड्यन्त्र बाहिर आएको हो ।
एआईजी नै भारतीय नक्कली नोटको कारोबारमा !
काठमाडौं । भारतीय नक्कली नोटको कारोबारमा नेपाल प्रहरीको एक जिम्मेवार एआईजीकै संलग्नता रहेको खुलासा भएको छ । गत फ्रेबरी भारतीय नक्कली मुद्धा २३ लाखसहित पक्राउ परेका सेख जावेद ईकबालले एआईजीको नाम पोलेपछि यो रहस्य बाहिर आएको हो । सेखले दर्जनौं नेपाली र भारतीय प्रहरीले नक्कली नोटका कारोबारीलाई सहयोग गर्ने गरेको बयान भारतीय एटिएसलाई (Anti-Terror Squad) दिएपछि यो रहस्य बाहिर आएको हो । भारतीय नक्कली नोटको कारोबारका शिलशिलामा शेखले थुप्रै पटक नेपाल–भारत सिमानाका विभिन्न ठाउँमा जाँदा समेत नेपाल प्रहरीका एआईजी कै गाडी प्रयोग गर्ने गरेको बताएका छन् ।
नेपालीको सहयोगी बन्न आब्हान
Posted by abc staff.3years,5months ago
काठमाडौं । सरकारले राहत समयमा पुर्‍याउन नसकेपनि निजि क्षेत्रको पहलबाट ठाउँठाउँमा राहत सामाग्रीको संकलन र वितरण कार्य तिब्र पारिएको छ । तामासलय र सचेत नेपालीको सयुक्त पहलमा नक्सालस्थित भूकम्प राहत संकलन केन्द्र स्थापना गरिएको छ । तामासलयमा रहेको राहत संकलन केन्द्रमा पुगेर जो कोहीले राहत सामाग्री उपलब्ध गराउन सक्ने अभियानले जनाएको छ । सो अभियानमा श्रीलकंन प्राजेक्ट एलटीएलले दश लाख बराबरको चामल उपलब्ध गराएको अभियानका संयोजक पूजा चन्दले बताएकी छिन् । उनले यो अभियानमा देशविदेशमा बस्ने सबैलाई सकेको ठाउँबाट सहयोग गर्न समेत आब्हान गरेकी छिन् । अभियानले राजधानीबाट नजिकै रहेका जिल्लाहरु क्रमश: दोलखा, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकमा राहत उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।
पर्यटकीय नगरी पोखरामा भूमाफिया सल्बलाउँदै
Posted by abc staff.3years,6months ago
कमल पौडेल अथक /
पोखरा । राजनीतिक संरक्षणमा मौलाएको दादागिरी र पोखरामा भवन आचारसहिंता मिच्ने भू–माफियालाई नगरपालिकाका भ्रष्ट कर्मचारीहरुको संरक्षण हुँदा पर्यटकीय नगरी पोखरामा उनीहरु झन सल्बलाउन थालेका छन् । जसका कारण पर्यटकीय नगरी पोखरा दिनप्रतिदिन कुरुप बन्दै छ । यसरी पोखराको सुन्दरता मेटाउने प्रयासमा काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी निकट नेता तथा कार्यकर्ता मात्र नभई बौद्धिकवर्गका रुपमा चिनिएका लेखक तथा स्वयम् पर्यटन ब्यवसायीहरु समेत त्यतिकै सक्रिय छन् ।
किन पुगेन ब्यूरोको आँखा ‘बी ग्रेड’ का गुण्डामाथि ?
काठमाडौं । राजधानीमा सर्बाधिक चर्चामा रहने ‘ए’ ग्रेडका कुख्यात पाँच जना डनहरुमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरी मुद्धा चलाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सिफारिस गर्‍यो । राजनीतिक आँडमा ठेक्कापट्टाको काम गर्दै आएका बाँकी आधा दर्जन ‘ए’ ग्रेडका डनहरुलाई भने ब्यूरोले अनुसन्धान नै गरेन । तर, दोस्रो दर्जा अर्थात ‘बी ग्रेड’ का दर्जनौं गुण्डाहरुमाथि अनुसन्धान गर्ने तथा मुद्दा चलाउने आँट किन ब्यूरोले गर्न सकेन ? यतिखेर चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
लोकमान, वन्त र मल्होत्राबीच रहस्यमय सम्बन्ध
काठमाडौं । भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी कोषराज वन्त, ब्यापारीको भेषमा सुन तस्करी गर्दै आएका दिपक मल्होत्रा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीबीच रहेको रहस्यमय सम्बन्धको गाँठो खुल्न थालेको छ । भोजपुर घर भई हाल काठमाडौंमा बस्दै आएका सडक विभागका पूर्व ईन्जिनियर दिनेश बस्नेत, प्रमुख आयुक्त कार्कीका पीए भवानी सुवेदी, कार्कीको नातामा ज्वाई पर्ने पूर्व डीएसपी सुरेन्द्र सिंह र तस्कर दिपक मल्होत्राबीच समेत अनौठो सम्बन्ध रहेको सूचना प्राप्त भएको छ ।
करोडौंको सार्बजनिक जग्गा हडप्नेलाई अख्तियारको संरक्षण
कमल पौडेल ‘अथक’ /
कास्की । ३० करोडको लागतमा निर्माण भएको रुपाकोट रिर्सोटका सञ्चालक पुष्पराज अधिकारीले एक सय रोपनी भन्दा बढी सार्बजनिक जग्गा र बन मिचेर पर्खाल लगाएपछि उनीविरुद्ध उजुरी परेको छ । दुई सय रोपनी जग्गामा निर्माण गरिएको रुपाकोट रिर्सोटको पर्खालभित्र परेको भनिएको करिब एक सय रोपनी जग्गा र बन लाम्पाटा सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिले संरक्षण गरिरहेको थियो । समितिले संरक्षण गरिरहेको जग्गा र बन मिचेर जर्बजस्ती रिर्सोटका सञ्चालक पुष्पराजले पर्खाल लगाएपछि उनीविरुद्ध जिल्ला बन कार्यालय कास्कीमा उजुरी परेको हो ।